Moscow | Cosmos koobi karayn
Posted in bannaan . jeclahay . waxaan . dhacaya . qorraxdu
Inkastoo tiro badan oo ah handadaad Warkii oo ku saabsan Moscow, kasta, kuwaas oo ka xoog badnaan doona cabsi ay, Moscow furmay haddii kale. dhowr maalmood ah aragti ku nool Moscow ka dib markii, waxaa magaaladiisa. Oo wuxuu kaa dhergiyaa tamarta iyo in iniinahoodu ku dhex jiraan waa wanaagsan yahay.
Magaalada waxay leedahay tiro badan oo ah dad wanaagsan oo jirdilay, taas oo had iyo jeer meel aad ku ordi, malaha, Arrimaha. Muscovites ahaayeen dad aad u dhaqanka, inkastoo bafflement guud, Dhowr mahadsanid doonaa, haddii aad furi albaab ama hay. inkastoo, waxaa jira qaar ka mid ah gardarada aad la saadaalin karin ee dhaqanka muwaadiniinta qaar ka mid ah.
Ururka nolosha ee aad u kala. Taas shaki la'aan si loo ogaado kuwa seeb teknoolajiyada kuwaas. si fiican u, sida muuqata, waxaa aad u qosol badan. About Moscow dhihi karaa, in nolosha magaalada, suurto gal, kharash ku muwaadiniinta ', in ay u noolaadaan. laakiin, marka la Moscow, caasimadda ah ee ugu dhow marka la barbar dhigo “walaalnimada” gobolka la magac la mid ah xidid – qudhunka caasimada ay, iyo, factor Tani waxay khusaysaa dalka oo dhan isku asal. Sababaha dhacdadan waa cad: “qudhunka kalluunka ka madaxa”. Iyo haddii ay jiraan ayaa raadineysa dal, halkaas oo ay ku qudhmi karo nolosha, ka dibna dognit dalka – wadankan ayaa kugu habboon,. dalka nacayb, Khayaanadii, wiswis, dheddigga xanniban tahey ama frigid, halligaad iyo kuwo Quusan, taas oo soo deldelay, “mouse”, “caarada” oo waxay ku tiil Warega “baranbaro” . Meel fiican, halkaas oo aad ka sugi karin, waayo,, in marnaba dhici doona.
Moscow – magaalo, kuwaas oo sanado badan sugayay kuu.
Shaki kuma jiro kaliya Cosmos ee
- My jacayl oo kaliya.
laakiin, hubaal, I
anigu magaaladan waxaan u jeclaaday,
iyo, suurto gal, waxa uu ii sheegay run ahaantii qaali
(Anigu ma aan naftayda u xaqiiqsadeen).
Waxaan noqon karaa ku caashaqay : I
iyo magaalada Moscow.
Waxaan ku noolaan karaa iyada oo aan Moscow,
laakiin haddii Moscow waayeen aniga la'aanteey?..
Moscow ii baasaboor for this post.
~ "* ° • Oo waxaan doonayaa inaan ku socdaan guud ahaan Moscow • ° * "~
· 0 ♥ ♡ Waan ku jeclahay Moscow ♡ ♥ 0 ·
Aum ☼ ₪ Cod meel fog ka raaxo ● • 0 · ˙˙